अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Page2– Sudarshan Khabar
बेलायतले युक्रेनलाई थप १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सुदर्शन खबर २३ फाल्गुन २०७८, लन्डन, बेलायत । युक्रेनमा जारी रुसी सैन्य कारबाहीका बीच बेलायतले कीभलाई थप १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्न लागेको डाउनिङ स्ट्रीटले सोमबार जनाएको छ । “आज घोषणा गरिएको थप १०० मिलियन डलर कोषले २२,००० सैनिकहरूलाई प्रशिक्षण दिने, २,००० ट्याङ्क विरोधी क्षेप्यास्त्रहरू […]
रुसले लागू गरेन युद्धविराम, सर्वसाधारणलाई समस्या
रुसले लागू गरेन युद्धविराम, २०७८ फागुन २१ सुदर्शन खबर \_ रुसले लागू गरेन युद्धविराम, सर्वसाधारणलाई बाहिर लैजाने काम रोकियो मारिपोल शहरमा गएको केही दिनदेखि भीषण युद्ध हुँदै आएको छ । तस्बिर : रोयटर्स रुसले अस्थायी युद्धविराम कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मारिओपोबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर लैजाने काम रोकिएको छ। स्थानीय अधिकारीले सर्वसाधारणलाई मारिओपोबाट बाहिर लैजाने काम स्थगित गरिएको […]
रुसी सीमामा पश्चिमाहरु परेड खेलेपछि युक्रेनमा हमला गरेका हौं : पुटिन
रुसी सीमामा पश्चिमाबाट खतरा देखिएकोले युक्रेनमा हमला गरेका हौं : पुटिन २० फागुन २०७८ सुदर्शन खबर पूर्वयोजना अनुसार नै युक्रेनमाथि हमला भएको हो। मस्को : रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण योजना अनुरुप नै भएको बिहीबार बताए। उनले भने, ‘युक्रेनमाथिको विशेष सैन्य कारबाही हामीले योजनाअनुसार नै गरेका हौँ, त्यसको तयारी हामीले गरेका थियौँ […]
प्रचण्डसँग चीन असन्तुष्ट किन भयो ?
के प्रचण्डसँग चीन असन्तुष्ट भएको हो ? सुदत्शन खबर काठमाडौं, २० फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि उनको दलभित्र ठूलै संकट आएको छ । माओवादीभित्र एमसीसी विरोधी पक्ष मोर्चाबन्दी गर्न थालेको छ । माओवादीभित्रको पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा बाह्य प्रभावको समेत चर्चा छ । एमसीसीको पक्षमा प्रचण्ड उभिएपछि छिमेकी […]
रुसबिरुद्ध युद्धमा युक्रेनको पक्षबाट नेपाली युबक पनि सामेल भयको खुलासा
युक्रेनका नेपाली युवक भन्छन्- म रुसबिरुद्ध युद्धमा होमिन्छु , फाल्गुन १८ २०७८ सुदर्शन खबर काठमाडौँ । हाल युक्रेनमा रहेका नेपाली युवा प्रताप बस्नेत युक्रेनी सेनामा भर्ति भएर रुसविरुद्धको युद्धमा होमिने भएका छन्। युक्रेनको भुमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने रुसको कुनै अधिकार नभएको भन्दै उनले अन्तिम सास बाँकी रहेसम्म आफू युक्रेनका लागि लड्ने बताएका छन्। आफू युक्रेनी सेनामा […]
विवाहको ३० वर्षपछि भएको थियो पुटिनको ‘डिभोर्स’,रहस्यले भरिएको छ व्यक्तिगत जीवन
विवाहको ३० वर्षपछि भएको थियो पुटिनको ‘डिभोर्स’, रहस्यले भरिएको छ व्यक्तिगत जीवन काठमाडौं फागुन १७, २०७८ सुदर्शन खबर एजेन्सी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन प्रायः कुनै–कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छन् । कहिले विलासी जीवनशैलीका कारण त कहिले अनौठो सोखका कारण चर्चामा आउँछन् अनि कहिले भने उनी आफ्नो महलको कारण बाहिर आउँछन् । पुटिनको राजनीतिक जीवनको बारेमा त […]
युक्रेनको दक्षिणी सहर खेरसन रुसी सेनाको कब्जामा
युक्रेनको दक्षिणी सहर खेरसन रुसी सेनाको कब्जामा सुदर्शन खबर २०७८ फागुन १८ काठमाडौं । रुसी हमलाको सातौं दिन युक्रेनको दक्षिणी सहर खेरसन रुसी सेनाको हातमा पुगेको छ । औषधि र खानेकुरालगायत खाद्यन्नको आपूर्ती सुनिश्चतका लागि राष्ट्रिय सरकारलाई सहयोग गर्न सो सहरका मेयरले आह्वान गरेका छन् । रुसी सेनाको हमलामा २०० जनाको मृत्यु भएको स्थानीय परिषद्का […]